Ao ambadiky ny sehatra amin'ny tetikasa REGENERATE | Reef Resilience
Ny ambangovangony amin'ny tetikasa REGENERATE
Jul 30, 2015 | Vaovao
Sary © Project REGENERATE
Tao anatin'izay taona lasa izay, ny IUCN dia nampitombo ny fifandraisany tamin'ny Maldives, vondrona nosy any amin'ny Ranomasimbe Indianina, miaraka amin'ny famolavolana ny programa IUCN Maldives Marine Projects, izay mikendry ny hanohana ny governemanta amin'ny famahana ny laharam-pahamehana amin'ny tontolo iainana sy ny fanamby napetraky ny Maldives. miatrika. Tetikasa REGENERATE (hiteraka hamafisan'ny tontolo iainana sy toekarena amin'ny Atoll Ecosystems) ny tetikasa REGENERATE, izay tetikasa lehibe manohana ity fitantanana maharitra ny loharano amoron-dranomasina ao Maldives ity, indrindra ny haran-dranomasina, mba hananana faharetana ara-toekarena, sosialy ary tontolo iainana manoloana ny zava-dratsy. vokatry ny fiovan'ny toetrandro. Hetsika fikarohana iray lehibe amin'ity tetikasa ity ny dia siansa roa tongotra hanadihady ny harena voajanahary sy ny hamafin'ny haran-dranomasina ary hanome ny angon-drakitra ekolojika ho an'ny Maldives.
Ny dingana voalohany amin'ilay dia, niaraka tamin'ny University of Queensland sy ny Catlin Seaview Survey, dia nampiasa fakantsary avo lenta hanangonana angona avy amin'ny atoll valo. Ny fizarana faharoa amin'ilay dia an-tsambo fikarohana dia nahitana mpikaroka 17, nisolo tena ny anjerimanontolo, andrim-pikarohana sy tontolo iainana manerantany, ary nifantoka tamin'ny Atoll Avaratra Ari (Alifu Alifu) ao Maldives. Ny ekipa dia nandrakitra an-tsoratra ny haben'ny trondro sy ny firafitry ny karazan-java-boahary, ny fifangaroan'ny benthic, ny demografika momba ny haran-dranomasina, ny fihenan'ny haran-dranomasina ary ny aretina, ny karazana invertebrate finday ary ny fahasalaman'ny foramnifera. Paikady lehibe iray amin'ny tetik'asa dia ny fananganana fahaiza-manao eo an-toerana amin'ny alàlan'ny fanofanana ireo mpahay siansa olom-pirenena amin'ny fanaraha-maso nasionaly. Ny mpahay siansa olom-pirenena avy amin'ny Alifu Alifu Atoll, renivohitra Lehilahy ary hatrany Colombo, Sri Lanka, dia niditra tao amin'ny ekipa mpikaroka, nahazo fiofanana ary nanampy tamin'ny fanangonana data ho an'ny vatoharan'izy ireo. Ny angon-drakitra voaangona dia hanampy amin'ny fanombanana ny faharetan'ny tontolo iainana haran-dranomasina. Izy io koa dia hanampy amin'ny fanombanana ny fiantraikan'ny hakitroky ny mponina amin'ny fahasalaman'ny haran-dranomasina. Ny fanombanana toy izany dia miompana amin'ny banga manan-danja ao amin'ny faritra ary manakiana any amin'ny firenena mora tohin'ny fiovan'ny toetr'andro, ary miankina amin'ny vatoharan-dranomasina fanta-daza sy ny loharanom-pahalalana omen'izy ireo. Ity fampahalalana ity, miaraka amin'ny angon-drakitra avy amin'ny fanombanana fanaraha-maso amin'ny ho avy, dia hampahafantatra ny fanapahan-kevitry ny politika sy ny fitantanana any amin'ny faritra.
Ny ekipan'ny Reef Resilience dia nahitana "tandindonin-doza" ho an'ity mpizaha zaridaina roa ity: Zach Caldwell, mpiantoka ny fisorohana ny loza voajanahary, ary Amir Schmidt, IUCN Maldives Marine Projects Field Officer.
Reef Resilience (RR): Azonao lazaina anay ve hoe ahoana no nahatonga ity tetikasa ity?
Zach Caldwell (ZC): Nisy fiakaran'ny maripana an-dranomasina voalaza tamin'ity taona ity tao amin'ny rano manodidina an'i Maldives. Satria fantatsika fa ny haran-dranomasina dia mora tohina noho ny fanalefahana sy ny aretina rehefa miady saina mafy, izany dia nanararaotra fotoana fohy hamahana ireo fanontaniana momba ny fikarohana momba ny faharetan'ny haran-dranomasina ao Maldives. Toa misy banga ny fampahalalana be dia be momba ny haran-dranomasina any Maldives, noho izany ny fikarakarana ekipa feno mba hahazoana antoka fa nangonina ny fampahalalana rehetra ilaina hamaliana ireo fanontaniana napetraka.
RR: Inona no anjara asanao tamin'ny dia?
ZC: Mpikambana tamin'ny ekipan'ny trondro aho. Niara-niasa niasa tamin'ny mpikaroka telo hafa aho mba hanisa sy hitovy habe amin'ireo trondro haran-dranomasina hita teny amin'ny lalan'ny fifindrana. Niara-niasa mivantana tamin'ny Scripps Institution of Oceanography koa aho mba hanangonana angon-kazo benthic. Nametraka teti-dratsy 10m x 10m teo amin'ny faran'ny ranomasina izahay ary naka sary ny sarin'ireto drafitra ireto. Ireo sary avy eo dia nanjaitra mba hanaovana sarintany amin'ny antsipiriany ny fanambanin'ny ranomasina. Izany dia manome antsika rakitsoratra maharitra maharitra momba ny firafitry ny fiarahamonina amin'io faritra io amin'izao fotoana izao. Noderainay tamin'ny alàlan'ny fanadihadiana momba ny trondro ireo data ireo mba hampitahana ny habetsahan'ny trondro sy ny firafiny ambany.
Manamboatra sahala amin'ny vatohara sy fikarohana momba ny trondro any Hawai'i aho mba hanomezana ny mpiara-monina aminay vaovao momba ny fahasalaman'ny vatohara mba hanampy amin'ny fampitana ny fitantanana ny vondrom-piarahamonina. Ny Hawai'i Conservation Nature dia miara-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka 19 manerana ny Fanjakana. Amin'ny maha ekipa mpanao fikarohana dia zava-dehibe ny hijanonantsika amin'ny toetr'andro momba ny fanaraha-maso farany ary manohana amin'ny tetik'asa fikarohana toy ny Project REGENERATE.
Amir Schmidt (AS): Manana andraikitra telo aho nandritra ny dia. Ny adidiko voalohany dia ny manome antoka fa ny ekipa mpikaroka dia manandrana maka ny toerana mety amin'ny fotoana mety. Miaraka amin'ny antsitrika am-polony sy antsitrika telo isan'andro dia tsy maintsy nifikitra tamin'ny fandaharam-potoana tery izahay! Ny anjarako faharoa dia ny fanaraha-maso ny singa siantifika olom-pirenena amin'ilay dia. Anisan'izany ireo siantifika olom-pirenena efatra ao an-toerana - olona roa avy amin'ny ONG tontolo iainana, mpanombana ny Green Fins Maldives, ary ny solontena iray avy amin'ny Environmental Protection Agency Maldives - izay nanampy tamin'ny fanangonana tahirin-kevitra momba ny trondro sy ireo endrika fiainana benthic, toy ny vatohara, spaonjy, ary ahidrano nandritra ny dia manontolo sy mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina iraika ambin'ny folo sy mpiasa ao amin'ny toeram-pialan-tsasatra izay niditra an-tsambo nandritra ny iray andro, nahazo an-tsambo sy fiofanana momba ny rano amin'ny fanaraha-maso ireo kavina mifantoka amin'ireo vondrom-piarahamonina bentik
RR: Ahoana ny hevitrao? mba hampidirana ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana sy ireo mpahay siansa ao anatin'ilay fiarandalamby, izany hoe inona no antony nandrisika anao amin'ity lafiny ity amin'ny tetikasa?
AS: Ny tanjonay dia ny hametrahana mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-dàlana dia ny hamantatra hoe iza no liana amin'ny fanaraha-maso ny haran-dranomasina, mba hananganana tambajotram-pahaizana siantifika olom-pirenena hanara-maso ny loharanon-dranomasina ary hampiasa izany vaovao izany hanamboarana drafitra fitantanana.
Matetika izahay mankany amin'ireo nosy ary manao atrikasa fanaraha-maso any. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nanararaotra nampiantrano ny atrikasa momba ny sambo fikarohana izahay. Ho fanampin'ny fiofanana dia hitan'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina hoe manao ahoana ny fiainana andavanandro amin'ny fitsangatsanganana fikarohana. Kely ny vondrom-piarahamonina nosy Maldiviana ary satria voafetra ny fitaterana eo anelanelany, dia tsy fahita firy ny fifandraisana toy izany. Heveriko fa mahaliana ho an'ny mpikamban'ny vondrom-piarahamonina sy ny mpikaroka izany, ary nanampy azy ireo hahita ny sary lehibe kokoa.
Mankanesa any amin'ny Network Forum hamaky ny ambiny amin'ny resadresaka.